किन दोहोरिन्छ चियामा समस्या,सरोकारवाला निकाय मौन ! - नेपालबहस
किन दोहोरिन्छ चियामा समस्या,सरोकारवाला निकाय मौन !
| १५:३४:४६ मा प्रकाशित
२३ माघ,इलाम । सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा चियाका विषयमा धेरै गुनासो गरे । उनले चिया उत्पादकले बोरामा खुट्टाले खाँदेर बेच्ने गरेको बताए ।
यतिमात्र होइन, बोरामा खादेको चिया किन्न उद्योगमा फोन गर्ने र ‘उचित दाम दिए ल्याउँछु’ भन्ने गरेको सुनाए । देशकै बढी चिया उद्योग र चिया उत्पादन हुने नगर हो सूर्योदय । चियामा पनि अर्थोडक्स यस क्षेत्रमा बढी उत्पादन हुन्छ । यस क्षेत्रका किसान, उद्यमी र श्रमिकले गुनासो पोख्ने ठाउँ हो नगरपालिका तर नगरप्रमुख समेत यिनै विषयमाथि गुनासो पोखेका छन् । त्यसमा पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा ।
नगरप्रमुखले यति मात्र भनेन् । उद्योग उद्योगबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा चिया क्षेत्र चल्नै सकस परेको राईले गुनासो गरे । उनले केही व्यक्तिले झापाको सिटिसी चियालाई इलामको चिया भन्दै सूर्योदय नगरपालिकास्थित कन्याममा बेच्ने गरेको समेत सुनाए । राई आफै नेतृत्वदायी पदमा छन् । आफँैले समस्या सुल्झाउनु पर्ने हो तर समाधान गर्नुको सट्टा गुनासो गरे । गुनोसो नगरप्रमुख राईको मात्र थिएन इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश वस्नेतको पनि थियो ।
इतिहास बोकेको र चिया क्षेत्रमा अगाडि रहेको नगरकै प्रमुखले चियाको बजारीकरणमा गहिरो गुनासो पोखे । उनले प्रविधि र प्रतिस्पर्धाका बीच नेपालको चिया विश्वबजार लानुपर्ने बाध्यता भएको बताए । उनले यथास्थितिबादी बजारकै कारण नेपाली चियाको बजारमाथि नउठेको गुनासो पोखे ।
प्रदेश नं १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर रानाको पनि कार्यक्रममा गुनासै पोखे । उनले नेपाली चियाको बजार भारतीय बजार भएको बुझ्नाले कम मूल्यमा बेच्नु परेको बताए । उनले चियाको बजारीकरणका लागि तेस्रो मुलुक वा भारतकै नयाँ बजार खोज्न आग्रह गरे ।
प्रदेश नंं १ मा कृषि मन्त्री छैन । राज्यमन्त्री भएपनि रानाले मन्त्रीकै हैसियतमा समस्याको उत्तर दिनुपर्ने हो तर ठीक विपरीत उनले झन् समस्या ओकले । “केही वर्षअघि चियाको बजारका लागि झापाको विर्तामोडमा अक्सन खोलियो भवन बन्यो” राज्यमन्त्री रानाले भने,“अहिले त भवन काम नदिने भयो होला । अक्सन मात्र होइन फर्निचर पनि काम नदिने भयो होला ।” रानाले पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादन हुने चिया प्रदेशको राजधानी विराटनगर नपुग्ने गरेको गुनासो गरे ।
जब चिया टिपाइ चैत पहिलो साता शुरु हुन्छ । अनि चिया आन्दोलन शुरु हुन्छ । उद्योगीले कमभन्दा कम मूल्य दिएपछि चिया किसान आन्दोलित बन्छन् । किसानले सधँै आन्दोलित बन्नुपर्छ । उद्योगी र किसानबीच सधैँ तनाब बन्छ ।
सूर्योदय नगरपालिकाका चिया किसान सोनाम काजी भन्छन्, “हामी किसान पनि सङ्गठित बन्न सक्दैनौँ । उद्योगीले किसान बाजाबाजको स्थिति ल्याइदिन्छन् ।” किसान साङ्गठनिक हुन नसकेको फाइदा उद्योगीले उठाउँछन् । एक आपसमा फाटो उत्पन्न गराउने अनि कम मूल्यमा चिया लिने कारण किसान आन्दोलित हुन पुग्छन् ।
हरियोपत्तीको मूल्य राज्यले नतोकेकाले समस्या भएको हो । न्यूनतम् मूल्य तोकेमा केही समस्या समाधान हुन्छ तर यसबारे चासो गएकै छैन ।
चिया क्षेत्रको गहिरो समस्यामा पर्छ, बजारको समस्या । नयाँ क्षेत्र÷देशमा तयारी चिया पठाउन डराउने अनि बजार विस्तार भएन भनेर कराउने पराम्परा चिया क्षेत्रमा नौलो होइन । चियालाई स्थानीय देशभित्रै खपत गर्न पनि कोशिस गरिँदैन, अनि तेस्रो मुलुक पठाउन पनि प्रयत्न गरिँदैन । नेपालको ठूलो बजार भारत हो ।
सधैँ विभिन्न समस्याका बावजुत नेपाली चिया भारत पठाउनु पर्छ । नेपाली चियाको एकाधिकार भएकै कारण भारतले समस्या दिन्छ तर नेपालले बजारको विकल्प खोज्दैन र समस्या सुल्झ्याएर भारत नै चिया पठाउन कसरत गर्छ । “पछिल्लो समय हामीले तेस्रो मुलुक चिया पठाउन कोशिस गरिरहेका छौँ । सम्भवत केही समयमै पठाउन सक्छौँ होला” बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा भट्टराईले भन्छन्,“चीनमा पनि सरकारमार्फत सरकार जीटुजी माध्यमबाट चिया लैजाने काम शुरु भएको छ । सम्भव भयो भने ठूलो हिस्सा चीन जान्छ ।
सधैँ एउटै किचलो र विवादमा पर्छ चियामा । दिगो समाधान नखोज्दा पटकपटक समस्या आउने गरेको विज्ञ एवं सरोकारवाला बताउँछन् । कृषि विज्ञ डा. योगेन्द्रमान श्रेष्ठका अनुसार चियामा राज्यको प्रत्यक्ष संलग्नता नहुँदा किचलो हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग नपाउने, वास्तविक पीडितको गुनासो नसुन्ने र वैकल्पिक मार्ग नरोज्नाले चिया क्षेत्र पछि परेको डा श्रेष्ठको भनाइ छ । हुन त सरकारले कानून कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत सक्दैन । ऐनमा तोकिएकै ज्याला नदिएका उद्योगीलाई कारबाही गर्न नसक्दा श्रमिक आन्दोलित हुनुपर्छ ।
दाहाल–नेपाल समूहले बोलाएको स्थायी कमिटी बैठक सर्‍यो भर्खरै
मुल्य बृद्धिसंगै बजारमा कागजको अभाव, ब्यवसायी मर्कामा २ मिनेट पहिले
महिलाविरुद्धको हिंसाका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिन्छः प्रधानमन्त्री ३ मिनेट पहिले
महिलाले हरेक क्षेत्रमा समान अधिकार पाउनुपर्छः मुख्यमन्त्री भट्ट ६ मिनेट पहिले
ओली, प्रचण्ड र नेपाल राजनीतिक इगोमा रुमलिंदा देश बन्धकमा ९ मिनेट पहिले
सर्वसाधारणको हितलाई लक्षित गर्दै रुपामा सप्ताहव्यापी शिविर १० मिनेट पहिले
बागलुङ–पर्वतः झोलुङ्गे पुलले जोडिएको बहुआयामिक सम्बन्ध, सात वर्षमा बने १८ नयाँ पुल २२ मिनेट पहिले
महानगरद्वारा ‘रिचार्ज काठमाडौं सञ्चालन कार्यविधि २०७७’ स्वीकृत ४० मिनेट पहिले
भट्टराई कुलवंश प्रतिष्ठान दमक नगर समितिको आठौं नगर अधिवेशन सम्पन्न १६ घण्टा पहिले
नेपाली कांग्रेसजस्तै जसपा पनि अनिर्णीत ४ दिन पहिले
स्टेजमै ढुंगामुढा प्रहार भएपछि अर्थमन्त्री बोल्दाबोल्दै हिडे ३ दिन पहिले
कथा : बामपन्थी बाैलाएकाे देश ३ दिन पहिले
सुदिपले गरे समिक्षालाई मायाको इशारा ३ हप्ता पहिले
चीनमा नयाँ फैसला, पूर्व पत्नीलाई घरायासी काम गरेबापत क्षतिपूर्ति दिन आदेश २ हप्ता पहिले
गाउँमा सडक पुगेपछि बाजागाजासहित खुशीयाली ६ दिन पहिले
सुदूर प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु ४ हप्ता पहिले
एमिकस क्युरीमा शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले राय दिने ३ हप्ता पहिले
ओलीले आज सुन्दरीजलमा आइपुग्ने पानीको अवलोकन गर्ने २ दिन पहिले
नाबालिकालाई करणीको प्रयासको आरोपमा एक पक्राउ ५ महिना पहिले
शेयरबजार ऐतिहासिक उचाईमा २ महिना पहिले
कोरोना भाइरसका कारण नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० स्थगित १२ महिना पहिले